Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo oo ku wajahan Laascaano
HARGEYSA: Madaxweynaha Somaliland oo booqasho ku soo gaarey 31Jan, 2016 magaalada Burco ayaa la filayaa in kulamo halkaas kula yeesho qaybha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer.
Safarka madaxweyne Axmad maxamad Silaanyo ayaa la filayaa inuu gaaro magaalooyin kale ee ka tirsan Bariga Somaliland sida magaalada Laascaano iyo Ceerigaabo sida warsidaha Garowe online u sheegeen ilo ku dhow xafiiskiisa.
Booqashada Silaanyo iyo waftigiisa ayaa la xiriirta ololaha doorashada Somaliland ee sanadka soo socda iyadoo ilo xogogaal sheegayaan in dadka dagan gobolka Togdheer ku wargalinayo inuusan musharax aheyn xiligaan islamarkaana tageeraan gudoomiyaha Kulmiye Muse Biixi oo ah musharaxa xisbiga.
Dhinaca kale warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in madaxweyne Silaanyo iyo waftigiisa boqoasho kadis ah ku tagaan magaalada Buhoodle ee gobolka Cayn halkaasoo iminka uu ku sugan yahay wasiirkiisa caafimaadka Xaglo-toosiye.
Wasiirka Caafimaadka Saleebaan Ciise Axmad Xaglo-toosiya ayaa magaalada Buhoodle dhowaan la tagey ciidamo farabadan kuwasoo la filayo iney ka qayb qaadan doonaan amni sugida waftiga madaxweynaha Somaliland.
Booqashda Silaanyo ee Buuhoodle ayaa noqoneysa tii ugu horeysay ee madaxweyne Somaliland ah ku tago magaaladaas oo ka tirsan gobolada Sideeda ah ee maamulka Puntland.
HARGEYSA, Somaliland- Gobolka Awdal ayaa saaka waxaa ka bilowdey diwaan galinta codbixiyaasha doorashooyinka la filayo iney ka dhacaan Somaliland sanadka 2017.
Diwaan galintaan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shaqaale farabadan oo ay hurmuud ka yihiin ...
Madaxweynaha Somalia oo Ubuxyo Dhigay Taalada Daljirka Dahsoon ee Muqdisho
Soomaliya 01.07.2017. 18:27